Semalt: तपाईंको साइटमा इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने 15 तरिकाहरू
बाह्य लिङ्कहरू सधैं वेबसाइट प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हो। यस लेखमा, हामी तपाईंको साइटमा उच्च-गुणस्तरको लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने मुख्य तरिकाहरू हेर्नेछौं - दुबै नि:शुल्क र सशुल्क। हामी प्रत्येक विकल्पको फाइदा र विपक्षमा पनि छलफल गर्नेछौं।
साथै, यी फाइदाहरूको राम्रोसँग मजा लिन, प्रयोग गरेर SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड उपकरण द्रुत गतिमा चीजहरू गर्न र तपाईंलाई आफ्नो लक्ष्यहरू छिटो पुग्न मद्दत गर्नको लागि एक प्रमुख कारक हो।
यो लेख सुरु गर्नको लागि, लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने नि: शुल्क तरिकाहरूसँग सुरु गरौं।
लिङ्कहरू प्राप्त गर्न नि: शुल्क तरिकाहरू
तल लिङ्कहरू प्राप्त गर्न केही नि: शुल्क तरिकाहरू छन्:
1. साइट डाइरेक्टरीहरूमा सूचीकरण
डाइरेक्टरीहरू साइटहरू हुन् जसले व्यवस्थित रूपमा अन्य साइटहरूको बारेमा जानकारी होस्ट गर्दछ। खोज इन्जिनहरूको आगमन अघि, डाइरेक्टरीहरू लोकप्रिय थिए किनभने तिनीहरू तपाईंले चाहेका साइटहरू फेला पार्ने तरिका थिए।
त्यहाँ धेरै प्रकारका निर्देशिकाहरू छन्:
सामान्य - तिनीहरूले विभिन्न विषयहरूको साइटहरू होस्ट गर्छन्।
सामयिक - एक विशिष्ट विषयमा साइटहरू स्वीकार गर्दछ।
क्षेत्रीय - एक विशिष्ट क्षेत्रबाट साइटहरू स्वीकार गर्दछ।
2. व्यापार निर्देशिकाहरूमा सूचीकरण
कम्पनी डाइरेक्टरीहरू साइट डाइरेक्टरीहरू भन्दा फरक छन् कि कम्पनी साइटहरू मात्र दर्ताको लागि स्वीकार गरिन्छ। तिनीहरूमा दर्ताको आफ्नै विशिष्टताहरू छन्, त्यसैले यस प्रकारको साइटलाई छुट्टै हाइलाइट गरिएको छ।
एक नियमको रूपमा, व्यापार निर्देशिकाहरू विशेष उद्योग साइटहरूमा पोस्ट गरिएका छन्। दर्ता गर्दा, तिनीहरूले तपाईंलाई कम्पनीको बारेमा जानकारी, जिम्मेवार विशेषज्ञको पूरा नाम, विवरणहरू प्रदान गर्न सोध्छन्। यो जानकारी प्रदान गर्न वा आफ्नो ग्राहकलाई सोध्न तयार हुनुहोस्। त्यहाँ काल्पनिक डाटा उपलब्ध गराउन आवश्यक छैन, किनकि मध्यस्थले सबै कुरा प्रमाणित गर्न सक्छ।
धेरै व्यापार निर्देशिकाहरू, कम्पनीको बारेमा जानकारी प्रदर्शन गर्नका साथै, साइट, उत्पादनहरू, विशेष प्रस्तावहरू बारे तपाइँको समाचार र प्रेस विज्ञप्तिहरू थप्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। यी अवसरहरूको फाइदा लिनुहोस्, किनकि धेरै व्यापार निर्देशिकाहरू स्रोतहरू भ्रमण गरिएका छन् र साइटमा लिङ्क मात्र होइन तर ट्राफिक पनि प्रदान गर्न सक्छन्।
3. जागिर बोर्डहरूमा दर्ता गर्नुहोस्
धेरैजसो जागिर साइटहरूले रोजगारदाताहरूको लागि छुट्टै पृष्ठ सिर्जना गर्छन् जहाँ तपाइँ कम्पनीको जानकारी र साइटको लिङ्क पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरैजसो साइटहरूको लागि, रोजगार परियोजना लिङ्कहरू विषयवस्तु हुनेछैनन्। यद्यपि, त्यस्ता लिङ्कहरूले परियोजनामा ​​लंगर नगरिएका प्राकृतिक लिङ्कहरूको साझेदारी बढाउन मद्दत गर्दछ र, मध्यस्थतामा, एक प्लस खेल्नेछ।
दर्ता गर्दा, कम्पनीको बारेमा वास्तविक डाटा समावेश गर्न निश्चित हुनुहोस्। तिनीहरू प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यो साइटमा 1-2 रिक्त पदहरू राख्नको लागि आदर्श हो ताकि कम्पनीको नक्सा पूर्ण रूपमा खाली नहोस्। तपाईंले वास्तविक जागिर खुल्ला पोस्ट गर्न आवश्यक छ जुन तपाईंको कम्पनीमा साँच्चै खुला छ।
4. विषयगत फोरमहरूमा लिङ्कहरू राख्नुहोस्
फोरम लिङ्कहरू सामान्यतया खोज इन्जिनहरू द्वारा उच्च मानिन्छन्। अपवाद लोकप्रिय थीम्ड फोरमहरू हो, जहाँ लिङ्क कम्पनी र यसको प्रतिष्ठामा वास्तविक चासोको संकेतको रूपमा देख्न सकिन्छ।
तपाइँ यस्तो फोरमबाट धेरै तरिकामा लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
फोरममा दर्ता गर्नुहोस्, सञ्चार गर्नुहोस्, साँच्चै फोरम सदस्यहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् र धेरै विषयहरूमा फोरममा कुख्यात प्राप्त गरेपछि, जहाँ सन्दर्भले अनुमति दिन्छ, तपाईंको साइटमा लिङ्क दिनुहोस्। धेरै फोरमहरूमा तेस्रो-पक्ष साइटहरूमा लिङ्कहरू पोस्ट गर्ने प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस् र साइट नियमहरू नमान्नुहोस्।
केही फोरमहरूले कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दर्ता गर्न र कम्पनी उत्पादनहरूको बारेमा छुट्टै विषयहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। फोरममा व्यापार जानकारी पोस्ट गर्नका लागि नियम र सर्तहरू हेर्नुहोस्।
यदि फोरममा घोषणा खण्ड छ भने, तपाइँ कम्पनीको उत्पादन वा सेवाहरूको बारेमा जानकारी थप्न सक्नुहुन्छ। फोरम नियमहरू पढ्न र पालना गर्न निश्चित हुनुहोस् ताकि तपाईंको विषय मेटिने छैन।
फोरममा एक घोषणा राख्नुहोस्, उदाहरणका लागि, विज्ञापनको लागि छुट्टै विषय (यस विधिको लागि शुल्क छ)।
5. सामाजिक सञ्जालहरूमा लिङ्कहरू प्रकाशित गर्नुहोस्
सामाजिक सञ्जालहरूमा लिङ्कहरू प्रकाशित गर्नका लागि धेरै विकल्पहरू छन्। पहिले, साइटको लिङ्क कम्पनी समूह वा सार्वजनिक पृष्ठमा राख्न सकिन्छ।
दोस्रो तरिका साइटको लिङ्कको साथ विषयगत समूहहरूमा पोष्टहरू राख्नु हो। यहाँ, तपाइँ सावधान हुन आवश्यक छ कि तपाइँको सन्देश समूह को दर्शकहरु को ध्यान आकर्षित गर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाइँ साइटमा उपयोगी लेख प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ र समूहमा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उपयोगी सामग्री मन पराउँछन्।
तपाईंले लोकप्रिय "लाइभ" समूहहरूमा पोस्ट गर्नुपर्छ। निष्क्रिय समूहहरूमा लिङ्कहरू राख्ने कुनै प्रभाव हुनेछैन। खोज इन्जिनहरूले बटहरू भएका समूहहरूबाट वास्तविक दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष समूहहरू छुट्याउन सक्छन्।
6. साझेदार साइटहरूमा लिङ्कहरू राख्नुहोस्
यो विधि व्यावसायिक साइटहरु को प्रचार को लागी उपयुक्त छ। प्रत्येक कम्पनीसँग व्यापार साझेदार र आपूर्तिकर्ताहरू छन् जसले आफ्नो वेबसाइटमा साझेदार कम्पनीको वेबसाइटमा लिङ्क प्रकाशित गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, निर्माताहरूले प्राय: डिलर साइटहरूमा लिङ्कहरू पोस्ट गर्छन्।
तपाईंले ठेकेदारहरूलाई तिनीहरूको साइटहरूमा पोस्ट गर्ने सूचनाहरू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईंले सूचनाको छेउमा आफ्नो परियोजनाको लिङ्क थप्नुहुन्छ।
7. साइटमा विशेष परियोजनाहरू
धेरै साइटहरूले ध्यान आकर्षित गर्ने र साइटमा प्राकृतिक लिङ्कहरू उत्पन्न गर्ने गैर-मानक सुविधाहरू होस्ट गर्छन्। उदाहरण को लागी, साइट मा, तपाइँ एक असामान्य पृष्ठ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन 404 त्रुटि को मामला मा देखिन्छ।
विधि अपेक्षाकृत नि: शुल्क छ, किनभने विशेष सुविधाहरू को विकास कोष को आवश्यकता हुन सक्छ। तर यो सार्वभौमिक र कुनै पनि साइट को लागी उपयुक्त छ।
8. विकिपिडिया र यस्तै परियोजनाहरूबाट लिङ्कहरू
इन्टरनेटमा धेरै विश्वकोशहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय विकिपिडिया हो। धेरै लेखहरूमा विभिन्न साइटहरूमा जाने अतिरिक्त कागजातहरूको लिङ्कहरू छन्। यदि तपाइँको साइटमा उपयोगी जानकारी छ भने, तपाइँ एक सामयिक लेखको लागि विश्वकोश खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको साइटमा लिङ्क थप्न सक्नुहुन्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि विश्वकोशहरू भारी रूपमा संयमित छन्। त्यसकारण, मध्यस्थकर्ताहरूले लिङ्क छोड्नको लागि तपाईंको साइटमा जानकारी साँच्चै बहुमूल्य र अद्वितीय हुनुपर्छ। लेख सम्पादन गर्नु अघि सामुदायिक दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्।
9. लिङ्क विनिमय
मास लिंक एक्सचेंज धेरै वर्षको लागि लोकप्रिय थियो। त्यसपछि, साइटहरूमा, तिनीहरूले विशेष विनिमय क्याटलगहरू सिर्जना गरे। मास लिंक एक्सचेंज अब पदोन्नति को एक निषेधित तरीका हो। यद्यपि, धेरै साइटहरूसँग बिन्दुहरू साझेदारी गर्न लाभदायक हुन सक्छ र खोज इन्जिनहरू द्वारा निषेधित छैन।
उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ ब्लगको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको क्षेत्रका ब्लगरहरूसँग लिङ्कहरूसँग उपयोगी लेखहरू आदानप्रदान गर्न मिलाउनुहोस्। यदि तपाइँ कम्पनीको वेबसाइट प्रवर्द्धन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ ब्लग वा विषयवस्तुको वेबसाइटसँग लिङ्कहरू आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
फेरि, म जोड दिन चाहन्छु कि सामूहिक लिङ्क विनिमय अनुमति छैन। त्यसकारण, लिङ्कहरू आदानप्रदान गर्दा तपाईंको सबैभन्दा लोकप्रिय पृष्ठहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड तपाइँको सबैभन्दा लोकप्रिय पृष्ठहरू र कुञ्जी शब्दहरू पत्ता लगाउनको लागि उपकरण ताकि तपाइँ तिनीहरूलाई पहिले राख्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, यदि तपाइँ विषयगत साइटहरूसँग लिङ्कहरू आदानप्रदान गर्नुहुन्छ र त्यस्ता आदानप्रदानहरूको संख्या उचित छ भने, यसले तपाइँको परियोजनालाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
10. सूचना दिनेहरू
एक इन्फर्मर एक विशेष स्वत: अद्यावधिक ब्लक हो जुन कुनै पनि साइटमा स्थापना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, एक सूचनादाताको सहयोगमा, तपाइँ वेबसाइटमा मौसम पूर्वानुमान, विनिमय दर र अन्य जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ, जुन सूचना प्रदायकद्वारा अद्यावधिक गरिनेछ।
तपाईं एक उपयोगी विजेट विकास गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य साइटहरूको मालिकहरूलाई यसलाई होस्ट गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। सूचनादाताले जानकारीको स्रोतको रूपमा तपाईंको साइटको लिङ्क समावेश गर्न सक्छ।
साइटमा लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सशुल्क तरिकाहरू
सबै साइटहरूले तपाइँको परियोजनाको लिङ्क नि: शुल्क प्रकाशन स्वीकार गर्दैनन्। साथै, विभिन्न कारणहरूको लागि नि: शुल्क विधिहरू प्रयोग गर्न सधैं सम्भव छैन:
तपाईंको साइटको उच्च प्रदर्शन अझै छैन विनिमयमा ठूला परियोजनाहरूमा रुचि;
विशेष परियोजनाहरू बनाउन कुनै सम्भावना छैन;
विश्वकोशमा प्रवेश गर्न थोरै उपयोगी सामग्री छ।
साइटमा लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सशुल्क तरिकाहरू उद्धारमा आउँछन्। बजेट विकल्पहरूबाट सुरु गरौं र अझ महँगो विकल्पहरूमा जाऔं।
11. लिङ्क भाडा
तपाइँ तपाइँको परियोजना को मासिक लिङ्क राख्न को लागी साइट मालिक संग सहमत हुन सक्नुहुन्छ। जब सम्म तपाइँ पैसा तिर्नुहुन्छ, लिङ्क साइटमा छ। त्यहाँ विशेष आदानप्रदानहरू छन् जसले साइट खोजी, चयन र वेबमास्टरहरूसँग सेटलमेन्टको प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ।
एक्सचेन्जको मद्दतले, तपाइँ द्रुत रूपमा विषयगत साइटहरूमा लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्कहरूमा सबै आवश्यक एङ्करहरू हुन सक्छन्। यस विधिको बेफाइदा यो हो कि भाडा लिङ्कहरू प्रकाशित गर्ने साइटहरू बीच स्प्यामी नभएका परियोजनाहरू फेला पार्न गाह्रो छ। तसर्थ, तपाइँको आदानप्रदान विषय मा उच्चतम गुणस्तर साइटहरु छनोट गर्नुहोस् र ती लिङ्कहरु को एक सीमित संख्या राख्नुहोस्।
12. स्थायी लिङ्कहरू किन्नुहोस्
विधिको सार तपाइँले प्लेसमेन्टको लागि एक पटक भुक्तान गर्ने मात्र फरकसँग लिङ्कहरू भाडामा लिनु जस्तै हो। भाडा लिङ्कहरू जस्तै, त्यहाँ धेरै स्थायी लिङ्क एक्सचेंजहरू छन्।
स्थायी लिङ्कहरू हटाउन गाह्रो छ, त्यसैले तिनीहरू व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छन्। यो फिल्डमा उच्च गुणस्तर र सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका साइटहरूमा मात्र स्थायी लिङ्कहरू पोस्ट गर्न सिफारिस गरिन्छ। त्यस्ता दाताहरूलाई केही वर्षमा खोज इन्जिनहरूले प्रशंसा गर्नेछन्। यस विधिको हानि यो हो कि उच्च-गुणस्तरका परियोजनाहरूमा "अनन्त लिङ्कहरू" महँगो हुन्छन्, किनभने, वास्तवमा, तपाइँ केवल लिङ्क मात्र होइन, तर विज्ञापन पनि खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
13. प्रेस विज्ञप्ति को स्थान
प्रेस विज्ञप्तिले तपाईंलाई साइटमा उपयोगी लिङ्कहरू र वास्तविक रूपान्तरणहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रेस विज्ञप्ति विशेष सेवाहरूमा पोस्ट गर्न सकिन्छ, साथै मिडियामा पठाउन सकिन्छ। यदि तपाइँ पत्रकारहरूलाई चासोको सम्भावना भएको घटनालाई दृढतापूर्वक घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भने, दोस्रो विकल्प उपयुक्त छ। अभ्यासमा, मिडियाले एक रोचक घटनाको बारेमा पूर्ण रूपमा नि: शुल्क लेख्न सक्छ। एकै समयमा, प्रकाशनले तपाइँको साइटको लिङ्क समावेश गर्दछ, जसले पदोन्नतिमा प्लस खेल्नेछ।
विधि सार्वभौमिक छैन र कम्पनीहरू र साइटहरूका लागि उपयुक्त छ जसले रोचक समाचारहरू उत्पन्न गर्न सक्छ।
14. क्षेत्रीय साइटहरु संग सहयोग
यदि तपाइँ क्षेत्रीय परियोजनाको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो क्षेत्रीय साइटहरूबाट लिङ्कहरू प्राप्त गर्न उपयोगी हुनेछ, उदाहरणका लागि, स्थानीय समाचारपत्र साइटहरू, अनलाइन मिडिया, ब्लगहरू, फोरमहरू। सामान्यतया, प्रत्येक क्षेत्रमा यस्ता धेरै परियोजनाहरू छन्।
साइटका प्रकाशकहरूलाई सीधै सम्पर्क गर्नुहोस् र व्यापारिक आधारमा समाचार, लेख वा प्रेस विज्ञप्तिको वितरणका सर्तहरू स्पष्ट गर्नुहोस्।
स्थानीय मिडियामा प्रायः मूल्यहरू उच्च हुँदैनन् र तपाईंले उपयुक्त मूल्यमा लिङ्कको साथ प्रकाशनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, सामग्री कति लामो पोस्ट गरिएको छ निर्दिष्ट गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो इष्टतम छ कि समाचार र लेखहरू सँधै प्रकाशित हुन्छन्, साइटबाट हटाइएन।
15. प्रायोजन र सम्मेलन उपस्थिति
यदि तपाईंको साइटका प्रतिनिधिहरूले सम्मेलन, प्रदर्शनीहरूमा भाग लिन्छन् भने, कृपया जाँच गर्नुहोस् कि यो सम्मेलन वा प्रदर्शनी साइटबाट तपाईंको साइटमा लिङ्क राख्न सम्भव छ।
त्यस्ता लिङ्कहरू पदोन्नतिको लागि पनि उपयोगी छन्। यदि तपाइँ संस्थाहरूलाई प्रायोजित गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया निर्दिष्ट गर्नुहोस् कि यदि यो संगठनको साइटबाट तपाइँको परियोजनामा ​​लिङ्क गर्न सम्भव छ।
हामीले तपाईको साइटमा इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने मुख्य तरिकाहरू हेरेका छौं, जुन खोज इन्जिन प्रवर्धनको लागि उपयोगी हुन सक्छ।
जे होस्, लिङ्क एक्सचेन्जलाई विचार गर्नु अघि, तपाईंको पृष्ठहरू खोज-इन्जिन अनुकूल बनाउन महत्त्वपूर्ण छ ताकि तिनीहरूको पहुँच बढि होस्। यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न, आफैलाई परिचित गर्नुहोस् DSD उपकरण, एक सबै-मा-एक SEO उपकरण जसले तपाईंलाई आफ्नो सबै SEO कार्यहरू कुशलतापूर्वक पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
साथै, यदि तपाईं SEO बाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई को सदस्य बन्न आमन्त्रित गर्दछौं Semalt साझेदार कार्यक्रम।